Indawo entle yaseFama yokuhlala eShropshire
Elinye icala yindawo ethandekayo ebekwe kwindawo entle yaseShropshire Countryside, kufutshane neNewport Edgmond.
Le ndawo yokuhlala iyinxalenye yendlu yethu yasefama enomnyango wayo, ifanelekile kwiindwendwe ezifuna ukonwabela indawo etofotofo, eyonyulwe kakuhle kunye nesiseko sabucala sokuhlola indawo yendawo, ndwendwela usapho kwiYunivesithi yaseHarper Adams okanye iLilleshall Sports Academy.
Sibekwe ngokulula kwiindawo ezininzi ezinomtsalane zasekhaya, kufutshane neShrewsbury kunye nomda weStaffordshire.
Elinye icala linamagumbi amabini alinganayo, elinye igumbi lokulala eliphindwe kabini elinye igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela elineshawa, ibhafu, isinki kunye nendlu yangasese eyahlukileyo.
Kukho isidlo sakusasa esincinci / indawo yokusebenza kwindawo yokumisa.
Isidlo sakusasa sibandakanyiwe ngendlela yeecereal, ubisi kunye neti/ukwenza ikofu. Ndiyakwazi ukunika isidlo sakusasa selizwekazi eliziswe kuwe ngexabiso elongezelelweyo. Nceda uqhagamshelane ngolwazi oluthe kratya.
Kukho i-microwave ebekwe kwigumbi lokuhlala ukuze isetyenziswe ziindwendwe. Ndingabonelela "ngesidlo sangokuhlwa sembiza enye" njengokongeza, ukutya okukhethekileyo kunokuphekelwa, nangona kunjalo kukho ukutya okuninzi okuthandekayo kufutshane. Ezi ziya kudweliswa kwincwadi yam yesiKhokelo, nceda ukhwaze ukuba ufuna izindululo.
Ibhedi yesofa kwigumbi lokuhlala inokwamkela iindwendwe ezimbini ezongezelelweyo ukuba ziyafuneka, kolu khetho kukho intlawulo eyongezelelweyo ye-£10.00/ ngobusuku.
4.96 · Izimvo eziyi-84
Simi kufutshane neYunivesithi yaseHarper Adam kunye neZiko leMidlalo leSizwe, eLilleshall.